So Wɔwoo Yesu December Mu Ampa? | Bible Kyerɛkyerɛ
So Wɔwoo Yesu December Mu?
BIBLE nka bere a wɔwoo Yesu nkyerɛ yɛn. Nanso, ɛma yɛn biribi a edi mũ a yebetumi agyina so aka sɛ wɔanwo no December mu.
Susuw sɛnea na wim tebea te saa bere no wɔ Betlehem, baabi a wɔwoo Yesu no, ho hwɛ. Ná Yudafo ɔsram Kislew (a ɛne November ne December hyia) no yɛ ɔsram a awɔw wom na osu tɔ kɛse. Ɔsram a edi ɛno akyi ne Tebet (December ne January). Ɛyɛ afe no mu bere a ewim yɛ nwini sen biara, na na sukyerɛma tɔ wɔ mmepɔw so wɔ bere ne bere mu. Ma yɛnhwɛ nea Bible ka fa sɛnea ewim tebea te wɔ saa beae no ho.
Bible kyerɛwfo Esra kyerɛ sɛ na Kislew yɛ ɔsram a wonim no yiye sɛ awɔw wom na osu tɔ kɛse. Bere a Esra kaa nnipadɔm a na wɔahyiam wɔ Yerusalem wɔ “ɔsram a ɛto so akron no [Kislew] da a ɛto so aduonu” ho asɛm wiei no, ɔbɔɔ amanneɛ sɛ “osu kɛse bi nti” nkurɔfo no “ho popoe.” Nnipa a na wɔahyiam no ankasa kaa sɛnea na ewim tebea te saa bere no wɔ afe no mu ho asɛm sɛ: “Osutɔ bere yi nso yɛrentumi nnyina abɔnten so.” (Esra 10:9, 13; Yeremia 36:22) Ɛnyɛ nwonwa sɛ na nnipa a wɔte saa beae hɔ ne wɔn nguan ntra wuram anadwo December mu!
Nanso, Bible bɔ amanneɛ sɛ, anadwo a wɔwoo Yesu no, na nguanhwɛfo wɔ wuram rehwɛ wɔn nguan. Nokwarem no, Bible kyerɛwfo Luka kyerɛ sɛ saa bere no, na nguanhwɛfo “da wuram rewɛn wɔn nguankuw anadwo” wɔ beae bi a ɛbɛn Betlehem. (Luka 2:8-12, Twi Bible, Akuapem) Hyɛ no nsow sɛ na nguanhwɛfo no da wuram ankasa, ɛnyɛ sɛ na wɔafi adi retu mpase awia bi kɛkɛ. Ná wɔde wɔn nguan no kɔ adidi wɔ wuram anadwo no. So sɛnea na awɔw wom na osu tɔ wɔ Betlehem December mu no ne asɛm a ɛne sɛ na wɔda wuram anadwo no hyia? Dabi, ɛne no nhyia. Enti nsɛm a ɛkɔɔ so bere a wɔwoo Yesu no kyerɛ sɛ wɔanwo no December mu. *
Onyankopɔn Asɛm ka bere pɔtee a Yesu wui kyerɛ yɛn, nanso bere a wɔwoo no ho asɛm kakraa bi pɛ na ɛka kyerɛ yɛn. Eyi ma yɛkae Ɔhene Salomo asɛm yi: “Din pa ye sen ngo pa, na owuda ye sen awoda.” (Ɔsɛnkafo 7:1) Ɛnde, ɛnyɛ nwonwa sɛ Bible ka Yesu som adwuma ne ne wu ho nsɛm pii kyerɛ yɛn, nanso ɛka n’awo ho nsɛm kakraa bi pɛ.
Bere a wɔwoo Yesu no, na nguanhwɛfo ne wɔn nguan da wuram anadwo
^ nky. 1 Sɛ wopɛ ɛho nsɛm pii a, hwɛ Reasoning From the Scriptures, a Yehowa Adansefo atintim no kratafa 176-9.
Nkurɔfo pii nim nea ɛyɛe a Buronya bae, nanso wodi Buronya. Hwɛ nea enti a Yehowa Adansefo nni Buronya.
Share Share So Wɔwoo Yesu December Mu?
bh kr. 221-222